Gnome Shell, ọ bụghị ihe ọjọọ | Site na Linux
Ugboko92 | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux
M ka na-echeta mgbe Gnome SHELL ka pụtara, ọ bụ ụdị nke 3, echiche dị mma, arụmọrụ jọgburu onwe ya, ọdịdị adịghị mma, ajọ njọ. Echetara m na n'oge ahụ, ịdị n'otu apụtabeghị, nke bụ ihe megidere, ọdịdị mara mma, mana arụmọrụ na-egbu mgbu, na ihe ndị dị ka ọdụ ụgbọ mmiri na-arapara na ị nweghị ike izochi ya ọzọ.
Ọ dị ka nke a, na m mechara ruo ihe karịrị otu afọ, ịbụ ndị ọrụ KDE, ruo izu abụọ gara aga. Mgbe ahụ ka m zutere Sabayon, ebe m nwetara udo, mana maka ebumnuche amaghị, m mechara budata GNOME ISO, echere m na ikekwe maka enweghị nhịahụ nke iji KDE kpatara m.
O doro anya na Gnome, emeela ka ọ banye n'ime ihe efu ma eleghị anya ndị na-eme ihe ọjọọ kemgbe ọtụtụ afọ bụ ha na nkụda mmụọ nke gburugburu ebe obibi kpatara, ọ na-echetara m ndị na-anọgide na-eji windo xp, n'ihi na ha enweghị mmasị 7 wdg.
Arụpụta bụ okwu ejirila ọtụtụ ihe iji gbochie GNOME 3, mana okwu a dị nke ukwuu, enwere ndị ndị fluxbox bụ ebe kachasị arụ ọrụ, ndị ọzọ na-eche na ọ bụ KDE SC, ndị ọzọ XFCE wdg, ọ bụ ya mere m ji Echeghị na n'okwu a, enwere ike ịsị na GNOME SHELL abụghị ebe na-arụpụta ihe.
Ka oge na-aga amụtara m na ihe niile bụ ihe gbasara ịnwale ihe nwa oge ma mee ka ha mara ha, ọ bụ otu ahụ, dịka ọmụmaatụ, enwere m ike ịmị mkpụrụ na-eji KDE SC, dị ka iji igbe na GNOME SHELL abụghị otu.
Ihe mbụ na-emetụ m aka mgbe niile, bụ ịghọta na ndabara ọdịdị nke DE a na-abụkarị ihe na-adịghị mma, ọ dịkwa na GNOME 2 "bare", mana ọ bụ ihe ọ bụla na-enweghị ike idozi ya na pịa abụọ. M ibudatara Faenza akara ngosi mkpọ, na Gburugburu isiokwu na voila.
Mgbe ahụ ka nke kachasị sie ike, izu gara aga, m ga-arụ ọrụ nyocha ahịa, enwere m windo 4 mepere, otu maka pdf, ọzọ maka Onye edemede, onye ọzọ maka ihe nchọgharị na ọzọ maka pdf ọzọ, ihe niile bụ ọgba aghara, Na-agbanwe windo buru m nzuzu, na oru m nwere ike ime n’ime awa abuo, o were awa ato, mana ubochi abuo ka emesiri m oru ozo ma achoputara m na m na-eme ihe banyere gburugburu ebe obibi, ma na o na abawanye. ngwa ngwa ma na-arụpụta na ya.
Mgbe ahụ, m nwalere ndị ọkwọ ụgbọ ala nvidia nke ọma, dịka ị ga-ahụ na nseta ihuenyo, etinyewo m na Playonlinux, Call of Duty Modern Warfare 3, Diablo 3 na Assasins Creeds, ebe ọ tụrụ m n'anya na etu gburugburu ebe obibi siri dị, m tinyere ule ahụ mkpebi mkpebi gbanwere na egwuregwu ahụ, enwere m ike ịhụ otu m hapụrụ egwuregwu ahụ, gburugburu ebe obibi ka dị na mkpebi nke obodo ya, nke dị na KDE SC nke Chakra ma ọ bụrụ na ọ mere, mana ụlọ ọrụ ọrụ ahụ, emeela ka ọ dị obere karịa, dị ka agbakọ.
M nwalere flash iji hụ ma ọ nwere tearing, na ọ dịghị ihe zuru oke, ya mere enwere m ekele maka ọrụ GNOME na Mutter na-eme, na ọ bụ ezie na onye na-ede egwú a enweghị nnukwu swiit anya dị ka Compiz ma ọ bụ KWin, nke ọ na-eme nke ọma. dị ka ị na-ejighị amd)).
Gburugburu ahụ adịla nnọọ mma, ma e jiri ya tụnyere oge ikpeazụ m nwara ya, oge nke GNOME 3.2, enwebeghị m mkpọka ọ bụla kemgbe etinyere ya, ihe niile adịgoro mfe, mana hey, na GNOME tweak tool, enwere ihe dị ka bọtịnụ na-emechilata wdg, nke enwere ike itinye ya azụ, na enwere ọtụtụ ihe nwere ike gbanwee ngwa ngwa. Ọzọkwa ịgbanwe isiokwu dị mfe, hapụ ha n'ụlọ, .temes na ọ bụ ya.
Udo nke ichota ndọtị masịrị m, dịka ọmụmaatụ m na-eji ndọtị maka Mpris 2, nke na-enye m ohere ịchịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị egwuregwu niile, site na nchịkọta menu.
Ọtụtụ n'ime unu ga-ajụ, gịnị kpatara ihe a niile ..., na azịza ya dị mfe, ahụla m ọtụtụ okwu ọjọọ banyere GNOME SHELL, na onye ọ bụla nwere ike inwe echiche ha, ọ ga-efu efu karịa, mana n'otu oge ahụ na-eche, ọ bụrụ na ndị ahụ anwalela, ha anọwo na ya karịa otu izu.
Enwere m ike ịsị na GNOME SHELL, adịghị njọ dị ka a ga - asị na ọ na - anwa ikwere, yana m na - atụ anya 3.8, ọ na - abanye na ọdụ Sabayon. Iji nkwenye niile m nwere ike ịsị na enweghị ajọ ọnọdụ, ma ọ bụ na-arụpụtaghị ihe na Linux, n'ihi na nrụpụta na-adabere na gị na mmegharị gị na gburugburu ebe ahụ, Unity, KDE SC, Gnome SHELL, XFCE, LXDE, WM, ha niile bụ ezigbo gburugburu , ihe niile dabere na gị.
Ya mere, a na m arịọ karịa otu onye nwere ike, chọrọ ma nwee oge, ịnye gburugburu ebe a otu uto, mana n'ụzọ doro anya na distro nke na-elekọta ya nke ọma, dị ka Opensuse, Fedora ma ọ bụ Sabayon.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Gnome Shell, ọ bụghị ihe ọjọọ
Ihe 104 kwuru, hapụ nke gị
Ekwenyere m na post ahụ, enwere m mmasị na ya n'ihi na ọ dị iche na ihe ọ bụla anyị jirila ọtụtụ afọ, yana mgbanwe ole na ole ọ ghọrọ gburugburu ebe mara mma. Ọ bụ ezie na ịgwa eziokwu na enwere m mmasị na 3.4 karịa 3.6, m ga-anwale 3.8 ma emechaa. Cheers
The kasị njọ akwụkwọ ahụaja mgbe. Gbanyụọ echiche ọ bụla i nwere, gbasara ihe ọ bụla.
Nwatakịrị nwanyị ahụ dị afọ 19, ebee ka nsogbu dị? (Abụkwa m 20)
Onweghi ihe jikọrọ ya na afọ nwata nwaanyị a.
WP bụ ihe jọgburu onwe ya ọzọ. 😀
AHhh okay, nke ahụ bụ ihe ọzọ xD
Achọrọ m ikuchi ya na 2011 ma m ka nọ ya.
Ekwenyere m na na mbụ njikwa ya bụ ihe ijuanya mana taa, mgbe m ga-eji Gnome2 achọpụtara m na ọ dị m ka oge ochie ma ọ bụghị ntụsara ahụ dị ka gburugburu "ọhụụ" m.
Eche m na ọ bụ ihe gbasara ma ihe masịrị onye na / ma ọ bụ ihe masịrị gị na ịnabata ihu ihu anyị «ahịhịa na mgbanwe»
Kpọmkwem, ka emechara, ọ bụ ihe niile gbasara uto na ịmara otu esi emegharị 🙂
"Mana n'otu oge ahụ a na m eche ma ndị ahụ nwara ya nọrọ ya karịa otu izu."
Ọ bụghị n'ezie. Nwalee ihe nke ọma tupu ịkatọ ha? Lee, ị na-ara ara ebe a ndị mmadụ na-anwale ya maka elekere ole na ole kachasị na ale, ịkatọ.
Zaghachi nye astolfo
Ahụrụ m na ị maghị atụmatụ ule, ebe ị na-eme atụmatụ otu ọrụ iji rụọ yana nsonaazụ ị ga-atụ anya inweta.
Adị m onye ọrụ gnome3 kemgbe ọ bịara debian ule na eziokwu bụ na taa enweghị m ike ime mkpesa, ọ bụ ezie na n'oge ahụ ọ were m ọtụtụ iji imeghari, ọkachasị na menu, na nnukwu akara ngosi.
N'ihe mara mma ọ dị m mma, arụmọrụ dị mma yana oriri nke ebule adịghị njọ ma ọ bụrụ na ọ bụ desktọọpụ nke n'onwe ya na-eji arụ ọrụ eserese, dị ka nghọta, onyinyo, wdg (613MB na iceweasel) imeghe). Na mgbakwunye, site na ndọtị, enwere ike ịnye ọtụtụ adịghị mma nke nhọrọ nhazi.
Echere m na ezigbo nsogbu na gnome bụ na ọkara na ogologo oge n'ihi iwu nke ndị mmepe na mbipụta nke ndakọrịta nke gtk3 na enweghị ozi zuru oke (akwụkwọ ntuziaka wdg), nke ga-emecha mee ka ọtụtụ ndị mmepe kwaga ma ọ bụ mepụta gị mmemme na qt nke mee elu mee ala gnome abaghị uru.
Enwere olile anya na ndị GNOME a ghọtara na iwu a agaghị ewetara ha mkpụrụ ma wụfuo mpako ahụ nke na-egosi ha ịmalite ị toa ntị na ndị ọrụ na ndị mmepe chọrọ, agbanyeghị na site na ihe ị hụrụ nke a agaghị eme ozugbo. : /
Anọ m na-anwale ya ruo nwa oge na Fedora (16 na 17) na m masịrị ya, yana ụfọdụ ndọtị, na-agbanwe akara ngosi na isiokwu, oge ụfọdụ tweak na ọ bụ ya. Ọ naghị adị gị mma iji ma ọ bụrụ na ị mara gị ahụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-edozi ngwa ngwa karịa ndị ọzọ. Ọbụlagodi mgbe m gbanwere na KDE Anọgidere m na-agagharị òké ahụ n'akụkụ iji hụ ngwa ndị ahụ.
haha na eme m mgbe m meriri, oge obula m na echefu ma were pointer gaa akuku elu imeghe menu xdddd
Enweelarị mmadụ atọ n'ime anyị, ọ bụ na ọrụ a dị oke anụ ahụ (?), Ọ nwere ike bụrụ ihe kacha mkpa mere m ji ahọrọ ya karịa Unity na ndị ọzọ.
Ndị Guizans dijo
Anọ m na-eji ya kemgbe ụdị 3.0 na Fedora ma achọpụtara m ya ngwa ngwa ma rụpụta ọrụ. Ihe doro anya bụ na ihe ịchọrọ bụ ụfọdụ akara ngosi ọhụụ ebe ọ bụ na ihe ọ na-eweta site na ntụpọ bụ ihe jọgburu onwe ya, mana hey, nke ahụ bụ okwu mara mma, ọ naghị emetụta arụmọrụ.
Zaghachi ndị Guizans
Na mbu, kelee na edemede pandev92!
Na Gnome 3, ejirila m ya ihe dị ka ọkara afọ ma ọ bụ karịa. Ebe ọ bụ na m wụnye Debian na ndabara na ọdịda nke 2011, ruo mgbe m gbanwere ya na KDE n'oge opupu ihe ubi nke 2012, m ga-ekwukwa na ọ rụghị ọrụ ọjọọ maka m. N'agbanyeghị nke a, enweghị m mmasị na ya ma ọlị, yabụ m ghọtara nkọwa, mgbe niile site na arụmụka, megide Gnome 3, n'ihi na ọ bụ nnukwu mgbanwe na desktọọpụ. Dị ka ị na-akọwa n'isiokwu ahụ, echere m na enwere gburugburu na-arụpụta ihe.
Hapụ isi okwu nke ọba akwụkwọ, ndakọrịta azụ, wdg na sayensị kọmputa, aga m ahapụ echiche m banyere ihe kpatara m ji hapụ Gnome 3 ihu ọma, nke mbụ nke KDE, na nke XFCE (nke m na-ezube ịga n'ihu ruo ogologo oge n'ihi na ọ kachasị yiri Gnome 2 ugbu a):
N’ụbọchị m n’ụbọchị, ekwesịrị m ịme emacs ka m dee ihe na LaTeX, gnuplot, pdf viewer, ụfọdụ spreadsheet, Mathematica, wdg. Nọmalị m nwere tebụl abụọ na ihe a niile, n'otu m na-eme atụmatụ yana nke ọzọ ana m ede akwụkwọ. Yabụ, mgbe emechara nke a na Gnome 3 enwere m ike ikwenye na ihe dị na XFCE na-efu m oge X, na Gnome 3 ọ na-efu m okpukpu abụọ. Ikekwe ọ bụ n'ihi interface ma ọ bụ n'ihi enweghị ike iji ya, amaghị m. Otú ọ dị, otu ihe ahụ dakwasịrị m na Mac azụ na 2010. Enweghị m ahụ iru ala na ya na ọrụ ndị dị mfe dịka idezi faịlụ na data na-efu m karịa.
Nke ahụ bụ ahụmịhe m. Ejirila m Gnome 3, ma, maka mkpa m, anaghị atụ aro ya ma ọlị. Agbanyeghị, amaara m na maka onye ọrụ ụlọ nke nwere ike iji PC ya maka akpaaka ọrụ, nchọgharị, wdg. Gnome 3 bụ ezigbo nhọrọ.
Na mmechi, echere m na obodo GNU / Linux kwesịrị ịkwụsị ịbụ nzuzu na ọgụ. O doro anya na onye ọ bụla nwere ihe masịrị ha, ihe nwere ike iyi na-adịghị arụpụta nye m onye ọzọ nwere ike ịdị ka tebụl ebe ha nwere ike ịrụ ọrụ ha ngwa ngwa.
N'ikpeazụ na dị ka ihe atụ, echere m na ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị anaghị achọ ntụziaka nke Canonical na-ewere na Ubuntu, anyị agaghị echefu na ọtụtụ ndị ọrụ na-eji Linux maka oge mbụ na-eme ya na nkesa a ma taa ha juputara obodo ọzọ distros. Dị ka ọ dị m.
Ndo banyere brik ahụ! Ekele!
Ọ bụ ezigbo oche, mana enweghị m ike ijide uche m na ekele Arch na Fluxbox Enweghị m ọtụtụ ihe na-adọpụ uche.
Zaghachi nye iwu
Echere m Openbox
«... na ọ dịghị ebe dị njọ, ma ọ bụ na-arụpụtaghị ihe na Linux, n'ihi na arụpụta na-adabere na gị na mmegharị gị na gburugburu ebe ahụ, Unitydị n'otu, KDE SC, Gnome SHELL, XFCE, LXDE, WM, ha niile bụ ezigbo gburugburu, ha niile nke gị ."
N'ezie ihe niile dabere na mmegharị nke ọ bụla. Gnome Shell ka nwere ụzọ, cheta kde 4 na mmalite ya katọrọ ya nke ukwuu, ọ kwụsiri ike, wdg, mana ị hụrụ na ọ ghọọla ọnọdụ kwụsiri ike. Gnome Shell nwere «tweak tool» ị nwere ike inye ya mmetụ ahaziri iche, na-ahapụ gburugburu ebe obibi nwere obere ọrụ na ọrụ aka n’otu oge. Gịnị ma ọ bụrụ na ọ dịtụtụputara aka bụ eziokwu ahụ bụ na ụdị nke ugbu a adabaghị na ndị gara aga, ka anyị cheta ọgbaghara niile nke mebere Cinnarch na Manjaro maka ịghara ịga n'ihu na cinnamon ...
Otu narị na iri ise na-amasị m Gnome Shell nwere "Amaghị m nke ahụ ..." Nke ahụ masịrị m, na ndị na-aga n'ihu na-enwe obi abụọ ịkata obi ma nye ohere nke abụọ. Aga m etinye Ubuntu Gnome 13.04 ọhụrụ (ugbu a enwere m ubuntu remix 12.10) nke na-abịa na ndabara desktọpụ a na "ekpomeekpo" a.
Otu ajụjụ ị nwere ike ị nweta nkwalite na Gnome-Shell 3.8 na Fedora 18?
"Otu ajụjụ, ị nwere ike ịkwalite na Gnome-Shell 3.8 na Fedora 18?" Nope, ị nweghị ike, ị ga-echere F-19.
Can nwere ike ikpokọta ya na jhbuild; ọ bụ ezie na ikekwe site na mgbe ọ na-agwụ, a ga-ahapụ fedora 19 XD. N’ezie, ọ dịghị mgbe m chịkọtara gnome na mpụga nke gentoo, yabụ enweghị m ike ịkọ ma ọ na-enye ọtụtụ nsogbu. Onwere ọ ga-ajụ gị maka gtk 3.8, nke ahụ nwere ike imebi ụfọdụ ngwa agbakọtara megide gtk 3.6, yabụ ị ga-enyerịrị ha iji weghachite njikọ dị ike, wee gafee mkpịsị aka gị n'ihi enweghị enweghị nkwekọrịta.
Site na ihe ndị Fedora gwara m, ọ bụ ihe ihere ime ya na ọ na-emebisi emebi.
«Ọ ga-abụ nsogbu iji kpokọta ma wụnye ya. O yikarịrị ka, n'oge a ga-emecha nwụnye, ha gaara enwe ohere mwepụta ọzọ "ha zara.
Ha na-ekwu na na OpenSuse 12.3 ị nwere ike.
na njedebe m si Fedora Gnome gaa Fedora KDE. Ọ na-ata ahụhụ site n'oge ruo n'oge ma ọ bụ na-agbaze shei. Na Fedora KDE Enwere m obi ụtọ ma ugbu a, m na Kubuntu 12.04.2 LTS na-arụ ọrụ nke ọma 🙂
Mgbe m nwara fedora gnome, ọ naghị eme nke ọma, n'ezie.
Ndewo. M na-eche Centos 7… .hehe. Ana m agbalị ịgwọ onwe m nke ụdị nri nri fedorian, ma ugbu a achọpụtara m, dị ka mgbe niile, na% & $ # »Lenovo m na Windows na-aga nke ọma karịa Linux ..
Kedu ngwaike nke Lenovo gi nwere? Versionitis dị njọ maka pc na arụmọrụ oge ụfọdụ.
@ pandev92: Ọ bụ G470, Intel B940, Intel HD3000 Graphics. Ihe abuo abuo na-aga nke oma n’elu ya bu Fedora na OpenSuse, nke mbu ka nma. Ubuntu 12.04, nke m họọrọ maka LTS, na-egbochi sistemụ m n'ihi okwu Sandy Bridge na kernel na-anaghị akwado ya.
N'otu aka ahụ, ọ bụghị nke ukwuu na otu, ma ihe m ga-arụ ọrụ na. Aga m ahụ mgbe m nwere ike ịgbanwe ụfọdụ akụkụ nke akụkụ, dị ka bupụrụ Epson ebi maka HP otu. Ka o sina dị, Windows 7 anaghị apụ apụ, yabụ ị nwere ike iche na agaghị m efu $ $ $ $, abughi m onye na-agba m ume ime ihe yiri nke ahụ, yana kwa, dị ka m kwuru, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nke a laptọọpụ.
Ọfọn, intel hd3000, eziokwu dị njọ ..., nkịtị na windo na-eme nke ọma karị, ọkwọ ụgbọala ahụ kachasị nke ọma, intel amalite ịdị mma site na 4000 n'echiche m, ma e wezụga windo ahụ chọrọ ike eserese ...
Ejirila m ya ọnwa isii na mbụ enwere m ahụ iru ala, mana maka ihe kpatara ọnwa gara aga amalitere m ịgbanwe ịgbanwe oche m ma ọ kwenyeghịzi m na site na ihe m gụrụ ebe ahụ abụghị naanị m onye ihe mere mere So.
N'ime ọnwa ole na ole m na-eche uche gị banyere gnome ọzọ 😛
anyị ga-ahụ XD, enwere m olile anya na m ahapụlarị usoro nke distroshop xd
ọtụtụ n'ime mkpesa ndị na-abịa site na G3, ma ọ dịkarịa ala n'ọnọdụ m, ọ bụ ihe isi ike nke nhazi banyere isiokwu vs KDE. Kedu maka ndọtị ha nwere na G3 bụ eziokwu, ọ kachasị mfe itinye ma jiri ma achọrọ m ịgbanwe isiokwu na G3 dị ka uwe na-agbanwe agbanwe dị mfe, dị mma na ngwa ngwa.
N'okwu m, agbalịrị m G1 maka ọnwa 3 ma ọ bụ karịa mana amaghị m otu esi emezi ihe ọfụma ebe ọ bụ na m na-eji ya atụnyere ụlọ ọrụ na ihe ndị ọzọ KDE nwere yana enwere m mmetụta na-arụpụta ihe.
G3 nwere ike ịdị mma ma na-arụpụta ụfọdụ, mana iji usoro mgbanwe ogologo karịa gburugburu gburugburu ndị ọzọ na nke ahụ nwere ike iwe, na mgbakwunye na eziokwu ahụ na G3 ọ bụla melite ndọtị n'ọtụtụ ọnọdụ kwụsị ọrụ n'ihi na ha anaghịzi arụkọ ọrụ na ị ga-echere ogologo oge tupu ha edozi.
Anaghị m akatọ gburugburu ebe obibi kama ọ bụ na ọ na-esiri m ike ịgbaso mgbe ị ga-emelite ma ọ bụ ihe yiri ya
Agbanyeghị, ọ masịrị m ka GTK ngwa si ele anya na gburugburu hahaha ha na nke ahụ ma ọ bụrụ na m jaa G3 mma nke na enweghị ihe m ga-enwe na anyaụfụ na anya na QT ngwa 😛
Ekwuru m hehehe
Ma eleghị anya, nwa agbọghọ ahụ n'azụ gị enweghị ọchị ọchị kachasị mma, mana onye bụ, na foto nke abụọ ha dị mma.
tomoe yamanaka ehhee :), bu arusi japanese xd
Ọ bụ ihe uto, agbalịrị m iji ya ma enwere m ike ịnweta ruo ụbọchị nke iri na enweghị m ike ọzọ.
Enwere m mmasị na gburugburu ebe obibi dị ka MATE ma ọ bụ Xfce ka mma.
Zaghachi ka ịmakụ0
Kedu maka pandev 92.
Ekwenyere m na gị, DE ma ọ bụ WM na Linux / Unix dị iche iche ma nwee ụzọ dị iche iche na nke ahụ bụ otu n'ime omume ọma nke Linux na ụwa Unix. Ka ha na-ekwu ebe ahụ, uto na-agbada n'ụdị dị iche iche ma echere m na ịsị ma ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ dị ka baroque dị ka esemokwu nke buru ụzọ bịa, ọkụkọ ma ọ bụ akwa.
Na desktọọpụ m enwere Arch na XFCE, na HP Mini 110 Arch Netbook na GNOME Shell, Acer ọzọ nwere Ubuntu LTS yana ngwakọ na Arch na OpenBox. Eziokwu bụ na enwere m ahụ iru ala na ha niile, mana GNOME bụ ọkacha mmasị m (ihe gbasara ụtọ na enweghị ihe ọ bụla).
PS M na-eji m ugbu a na laptọọpụ na Windows 8 n'ihi ihe nke akwụkwọ ikike na ndụ batrị. Achọrọ m ịgbanwe ya mana agaghị m eme ya ruo mgbe m chọtara nhazi dị mma nke na-anaghị emebi m ma ọ bụ belata ndụ batrị na nke a na Linux n'agbanyeghị na ọ ga-ekwe omume, ọ bụrụ na ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. N'ezie na Windows ọ na-ewe 5 awa na Linux naanị 2 na eziokwu bụ ihe dị iche bụ ọtụtụ.
[YaoMing] M tinyere Nana Mizuki dị ka akwụkwọ ahụaja [/ YaoMing].
Ka o sina dị, egwuregwu ahụ dị na omume na maka ebumnuche ogologo oge nke GNOME 3 nwere, ebe ọ bụrụ na ị kwenyeghị (na obere na akwụkwọ ahụaja ahụ), ị nwere ike ịhọrọ XFCE na / ma ọ bụ LXDE (karịchaa, maka ndị windo).
Maka ugbu a, m ga-echere ruo mgbe Debian Stable melite ka m wee tinye MATE na / ma ọ bụ LXDE n'ime ya (omenaala, omenaala ebe niile).
Obere Lupe?. Ee ... Gnome Shell na-adịwanye jụụ.
You maara ya: O?
Dị ihe ahụ mere ụfọdụ n’ime ha. Mgbe Ubuntu 11.04 rutere m nwetara Gnome 3, enweghị m ike iji ya n'ihi atụmatụ ole na ole nke kọmputa m nwere. M zụtara ihe ka mma n'oge na-adịbeghị anya ma wụnye Debian ... uff, ọ dịịrị m mfe ịgbanwee ihe ngebichi, jikwaa ihe niile m chọrọ site na ịpị aka ole na ole, amaghị m, ọ masịrị m. Debian dị oke njọ na-agba ọsọ 3.4 n'ihi na 3.8 na-ele anya karịa nnukwu.
Site n'ụzọ, echere m echiche ịme ihe yiri nke ahụ, n'ihi na ruo ọtụtụ afọ, m na-agụ ahụhụ na ihe ọjọọ nke Gnome Shell na ọ kwụsịrị-maka m - dịka ihe ukwu.
Nye m nsogbu ahụ abụghịzi gnome-shell, mana ụkọ ọrụ nautilus na-arịwanye elu, nsogbu nke n'eziokwu na-ebutekwa ụdị nke ubuntu na-esote.
Ọ bụ ezigbo gburugburu ebe obibi, mana ozugbo ị tinyere ndọtị nkwalite ya na-adịghị nwayọ nwayọ.
Nsogbu a n’onwe ya abụghị nke ahụ, ọ dịka ihe niile, ọtụtụ ndọtị anaghị arụ ọrụ, ọ bụ otu ihe ahụ mere na mgbakwunye firefox n’oge gara aga.
Anaghị m ekerịta ahụmịhe ahụ, eziokwu na-arụ ọrụ nke ọma maka m.
My GNOME3 masịrị ya site na mbido, ọ bụ ezie na dịka GNOME niile, ọkachasị ngwa ya, achọpụtara m na ọ bụ nwa; ọphu ẹphe aphụkwaru ẹphe. Ọ dị mma, ọ dị na ọkwa mmepe siri ike, mana ndọtị ndị rụụrụ gị ọrụ n'otu ụdị kwụsịrị ịrụ ọrụ na nke ọzọ, enweghị ụzọ ị ga-esi nwee njikwa dị mma na desktọọpụ yana dịka m kwuru GNOME ngwa
na omenala ha enweghi arụmọrụ nke ngwa KDE.
Agbanyeghị GNOME Shell nwere ụfọdụ ezigbo echiche nke m webatara na desktọọpụ m KDE dị ka ebe ọkụ ọkụ, nke bụ akụkụ nke KDE ogologo oge.
Shell ka na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ị ga-enye ya oge.
Ekwenyere m, ọ bụ naanị ihe gbasara ịmalite ime ka ọ mata otu ọ bara uru. Can nwere ike ịnwe ọnụ, ndị ntụgharị, chọọ na google n'ụzọ dị oke ọsọ. site na ndọtị.
Zaghachi na Germany
i nweghi ike iji compiz ergo Enweghị m mmasị; compiz ka enweghi onu ahia, ahubeghi m ihe obula nke kpuchiri ya
ị kwesịrị ị na-agbalị kde ya niile graphic utịp
Achọghị m shei Gnome na mbụ mgbe m nwara ya na Ubuntu, mana mgbe m na-eji ElementaryOS enwere m mmasị etu esi ahazi Gnome Shell.
Naanị nkatọ m ga-eme bụ "nhazi ahụ kwesịrị ka ọ dị mfe, dịka ọ dị na gnome2"
Dabere na post ahụ, amalitere m iji Gnome Shell site na mbido ma kpebisie m ike site na nkwụsi ike.
Mana taa bụ desktọọpụ kachasị amasị m # 2, nke abụọ naanị na Cairo Dock. (Ana m agbanwe otu na nke ọzọ ka ọ ghara ịgwụ m ike)
Maka m ọ bụ desktọọpụ kachasị arụpụta, ụzọ mkpirisi keyboard na-eme nchọgharị ma na-arụ ọrụ ngwa ngwa (naanị ị ga-amụta ha) desktọpụ dị ike bụ ihe ịtụnanya na-adịghị adị na gburugburu ebe ọ bụla, ndọtị ahụ dị ezigbo mma, naanị "mana" na ị m tinyere ya bụ enweghị mmetụta, mana maka ndị na-eji PC ha eme IT ma ghara ịmasị mmetụta desktọọpụ echere m na ọ bụ gburugburu ebe kachasị mma. XD.
Ekwenyere m, ozugbo iji ya (ọ bụ obere oge). amama ga-aba uru. tumadi mgbe agbakwunyere mgbakwunye. dị ka nkwụsị, tụgharịa ederede site na shei, google site na shei, wụnye ngwa site na nyocha. ikwu ihe ole na ole. gnome amaka na nnoo ihe bara uru
N'ezie, ee, gburugburu ebe a na-etinye ihe niile iwu, dịka ọmụmaatụ iji mkpesa maka mmụọ nke ya, Kde nwere kwin mana ọ ga - ahapụ gị ka ị jiri onye na - ede ihe ịchọrọ, nke ahụ bụ nnwere onwe na ihe na - ewepụ ihe niile. Ọ na-adịwanye ka macs na mmeri, na ihe dị iche na Gnu / linux bụ ọrụ nke nkuzi ahụ; ọ dịkarịa ala m na-eche otú ahụ
Enwere m obi abụọ na enwere onye ara ọ bụla na-agbanwe kwin ka ọ bụrụ ihe ọ bụla ..., belụsọ na ha masịrị nsonazụ pụrụ iche, compiz anaghị akwụsi ike karịa kwin xddd, na n'eziokwu, ọ bụrụ na ha ahọrọ ịmanye nsị, ọ ga-abụ n'ihi na ọ bụ naanị ntamu mezuru ihe ha chọrọ.
Amaghị m ebe nsogbu ahụ dị, enweghị m ahụrụ ya n'ezie. Na ihe dị ka ha dị, compiz nwere arụmọrụ ka mma karịa kwin, nke ikpeazụ m jiri wee daa karịa ụgbọ ala nna nna m, enweghị mmiri dị mmiri mmiri.
Ọzọkwa ebe ọ bụ na gnome shei abụghị ihe ọ bụla karịa akwụkwọ nchịkwa nke njikwa na mac launpad nwere ike ịhapụ ya dị ka nke a, ya bụ, otu ngwa ọzọ na-ewepụghị akụkụ ndị ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwere ike iji ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị, mba
Ọfọn, dị nnọọ gaa google na ị ga-ama etu ejikọghị compiz bụ, :) ọkachasị 0.9
Dị ka ị na-ekwu, ọ bụ ihe metụtara uto na / ma ọ bụ omenala!
Ejirila m Gnome Shell na Fedora 18 na Sabayon, mana, dị ka uto nke m bụ ịnwe obere desktọọpụ, ahọrọ m LXDE, ma ọ bụ Openbox.
"Ọ bụ ọgba aghara niile, windo na-agbanwe agbanwe ghọrọ m onye nzuzu"
Ma nke ọma, nke ahụ bụ naanị ihe m na-akatọ Gnome Shell n'ihu ọha ... ọ bụ ya mere na XFCE ji m ọsọ ọsọ karịa iji Gnome Shell.
Ihe ọ bụla ọzọ dị mma, gburugburu ebe obibi dị ịtụnanya, agbanyeghị na m nọ na XFCE, m wụnye "gnome-terminal, gnome-system-monitor, eog, gedit, nautilus"
Gnome 3 na shei ya bụ nke ịnwe windo 8, naanị ya dị ntakịrị.
Ka anyị hụ .. Nnọọ shei mara mma, ọtụtụ ego na ihe mkpofu .. Ọ dị mma, mana m na-eche, mgbe anyị si na desktọọpụ gaa iji ngwaọrụ GNOME. Gedit ka bụ ọgbaghara, ọghara ikwu, web dị na aka nri ziri ezi na webkit mana bia, o nweghi nnukwu .. Anyway.
Nwoke oburu na anyi adi otua, dragon player bu plasta xD nke na edeghi akwukwo ozo ma oburu na ichoro, konqueror bu ihe nchọgharị crappy, amarok dị arọ wdg wdg, na njedebe ị kwụsịrị ịwụnye smplayer, clementine, chrome wdg xD
Gedit bụ ọgbaghara? Enweghị ndị editọ ọzọ na gtk +, bụ totem a ọgba aghara? Wụnye gnome mplayer, web adịghị mma? wụnye chrome, Firefox, opera ...
rhythmbox bụ sh ...? jiri nwayọ wụnye xnoise, beatbox, sonata wdg xDDD
Ngwa nke gburugburu ebe obibi dịkarịa ala, ihe mbụ m wepụrụ.
Anọ m na-ekwu maka ngwa nke ọrụ ahụ, n'ihi na m na-etinye VLC, SMPlayer ... wdg. Anya gị, m ka nwere ọtụtụ nicer desktọọpụ karịa Gnome Shell na-erepịakwa obere .. HAHAHA, ma dị ka anyị na-ekwu ebe a: Ihe uto .. 😛
Edito: Na mgbe anyị na-ekwu maka Nautilus, kedụ ihe ị na-eme? Kedu ihe ị wụnye?
nautilus? Agbanwebeghị m ya, anaghị m achọ ihe karịrị otu ihe nchọgharị faịlụ, dịka na dolphin, naanị ihe m na-eme bụ imeghe faịlụ na mgbe ụfọdụ na-eji nhọrọ ọchụchọ, achọghị m karịa.
che totem dị mma na gedit bụ nchịkọta akụkọ magburu onwe ya, ịnwere ike itinye plugins n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ
a video ịmụta gedit
Gnome Shell, ọ bụghị ihe ọjọọ ... mana ọ bụghị XD kacha mma
Choosehọrọ nke DE anyị chọrọ iji, ihe ndị dị iche iche, ihe ịchọ mma, ịdị mfe nke iji, wdg.
Mana iji kọwaa nke ka mma ma ọ bụ ka njọ (okwu na-edochaghị anya, n'ụzọ) anyị kwesịrị ịtụle ihe ndị anyị nwere ike ịlele n'ụzọ ziri ezi, dịka ikike Nhazi (a ga-enwe ndị na-arụrịta ụka n'okwu a na ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịhazi DE ha otu, mana ajụjụ bụ, na nhọrọ dị ma ọ bụ na ọ bụghị, mgbe niile ma onye ọrụ ahụ mara etu esi eji ha ma ọ bụ na ọ bụghị.)
NTULKWU (Nke a na-arụ ọrụ na arụmọrụ).
Ndakọrịta (ya na ndị ọzọ ụkpụrụ ụlọ, ụwa nke distros dị ugbu a, ndị ọzọ DE, otu DE na nsụgharị ndị mbụ na mgbe e mesịrị).
Ma dịka anyị nọ na mbara igwe FOSS, tụleekwa ụzọ ọrụ a si eso ndị ọrụ na ndị mmepe obodo.
N'ezie echefuru m ihe ndị ọzọ, mana n'ịtụle ihe ndị a ma na-achọ nguzozi n'etiti ha, echere m na obi abụọ adịghị ya na DE na-ewere okpueze ahụ.
Dị n'otu !!!
Ọ bụrụ na mgbe ị tụlechara ihe ndị a na maka obi ụtọ dị ọcha nke na-abụghị "ihe kachasị mma" ka a họọrọ, mkpebi ahụ bụ ihe a na-akwanyere ùgwù kpamkpam, ebe ọ bụ na a na-eme ya na uto ma ọ bụghị echiche efu na-adabere na mgbasa ozi, amaghị (nke uru nke nhọrọ ndị ọzọ ) ma ọ bụ omenala nkịtị.
Bụ onye zuru oke na nke anaghị eme ka ọ kachasị mma, mac osx abụghị nke a na-ahụkarị, mana ọtụtụ na-ahọrọ ya, n'ihi na ọ na-emeju ihe ndị mmadụ chọrọ, nkwụsi ike. arụmọrụ na swiiti anya, ihe ndị ọzọ niile, bụ ihe maka ndị ọrụ ike.
"N'ịbụ ndị kasị zuru ezu na customizable anaghị eme ka ọ kasị mma,"
Ekwuru m: arụmọrụ, modular, ndakọrịta, na mmekọrịta nke obodo, na ha na-achọ nguzozi. N'oge ọ bụla ekwuru m "zuru ezu"
"Mac osx abụghị nke a kacha ahụkarị, mana ọtụtụ na - ahọrọ ya"
Leba anya na njedebe nke okwu m n'ime eluigwe na ala FOSS, ọ bụ ezie na dị ka ọtụtụ na-ahọrọ ihe anaghị eme ka ọ ka mma (ọ bụrụ na anyị bu ebumnobi na anyị na-ahụ ikpe izugbe na nke na-abụghị nkọwa).
“N’ihi na ọ na-egbo ihe ndị mmadụ chọrọ, nkwụsi ike. arụmọrụ na swiiti anya, »
Mee ka o doo anya na ajụjụ ndị nwere isi adịghị adaba n'ịchọpụta uru niile nke DE, nke ahụ abụghịkwa ịhọrọ otu maka ojiji gị. Site n'ụzọ, abụ m ndị KDE na-enye m arụmọrụ, nkwụsi ike na swiiti anya (na ọtụtụ ndị ọzọ).
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịma ma ọ bụrụ na mmiri mkpụrụ osisi oroma kacha mma karịa Coca-Cola, anyị na-ahụ uru anụ ahụ na nke akụ na ụba yana ogologo wdg. na ha na-ewetara anyị ma anyị kwubie na ihe ọ theụ juiceụ dị mma.
Ma eleghị anya, mmadụ na-egbu mmanụ na mmanụ, ebe ha bi na ha enweghị ike ịnweta ya, ma ọ bụ na ha enweghị mmasị na uto ahụ, mana ndị ahụ bụ okwu ikpe na / ma ọ bụ dabere na okwu esemokwu, mana ihe ọ juiceụ juiceụ ka mma.
Ọ bụrụ na mgbe ịmara nke a, enwere ndị na-ahọrọ ị drinkụ Coca-Cola kama ihe ọ juiceụ juiceụ (mgbe ụfọdụ m na-eme) mkpebi ahụ kwesịrị ịkwanyere ùgwù, mana ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi:
M na-aguputa (gaa ego XD) «uche na-enweghị isi na-adabere na mgbasa ozi, amaghị (nke uru nke nhọrọ ndị ọzọ) ma ọ bụ omume nkịtị.»
O nwere ike ịbụ na ọ ga-akacha mma ime mkpebi ziri ezi.
Dị nnọọ chọọ a bit maka launpad, na compiz 0.9 bugtracker, na ị ga-amarakwa. Na nvidia ha nwere ahụhụ maka ọnwa nke na-eme ka windo na-agba oji mgbe ụfọdụ.
XD Nke ahụ kwuru apụghị ebe a, nri?
Nwoke oburu na ichoro ihe oroma na coca cola, ebe ahu gi xD, coca cola bu ihe kariri okpukpu xddd, oroma bu ihe na-asọ oyi xD ma bụrụ acidic, i ghaghi itinye okara kilo shuga XD
hahaha Kpọmkwem, ndị ahụ bụ omume m na-ekwu maka ya, ị ga-ahụrịrị ha ugboro ugboro na fanboys nke ụfọdụ distros.
Nnọọ! Achọrọ m ịkọrọ gị na ahụmịhe m na Gnome-Shell dị ezigbo mma. Na ihe niile maka a dị mfe ekwe omume na ọ na-enye. Amaara m na ọ bụghị expressly ihe na-abịa na ndabara, ma ... gị na ebe nrụọrụ weebụ na ndọtị! Ọ bụ ihe dị egwu. Etinyere m ndọtị 12 yana enwere m desktọọpụ mara ezigbo mma ma nwekwaa aghị ihu ma ọ bụrụ na ịnweta ebe na ngwa. Mgbe ekwuru na obere nhazi -… lee anya na ndọtị! Na mgbakwunye, a na-enye ha iwu site na ọkwa kachasị elu ruo na nke ewu ewu.
N’ezie, a na m achọta ya K’OSIRI N’ỌBARA ... ozugbo amaara “aghụghọ” ndị ahụ.
Eji m 3.6 gnome mee ihe dị ka izu atọ maka pc ha nyere m ọrụ ma enweghị m ike ịhazi ya: p
Enwere m ike iji ya mee ihe mana emeghị ka m kwenye, enweghị nhazi bụ ihe mbụ megide ya, ị gaghị enwe ike ịgbanwe ihe dịka ọnọdụ nke mkpọchi mkpọchi, belata, wdg. N'aka ekpe nke windo ma ọ bụ nkuku dị ọkụ dị ka na KDE.
Ọzọkwa, isi nsogbu m na-ahụta nke m na-ekwu na m na-arụpụtakwu ihe na kde bụ Dolphin. Ahụghị m onye nyocha faịlụ ọ bụla na gnome nke na-abịa arụmọrụ nso. Dịka ọmụmaatụ, nzacha faịlụ ọsọ ọsọ na ctrl + 1, nyocha ọdịnaya faịlụ, nkesa ihuenyo, ngwa ngwa ngwa ngwa na f4, ntinye na git, svn, ssh, wdg n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
* Ndenye faịlụ ọsọ ọsọ na ctrl + i
N'eziokwu na ọ ka mma a otutu .. n'ezie m ga-eji a zuru ezu DE .. ma ọ bụrụ na m na-aghọta na ọganihu dị ịrịba ama .. m nwere ike ikwu na ya na ihe arụ a na-akpọ ịdị n'otu ..
Odighi ka ihe ojoo n’ile m, mana odighi nso ebe ezigbo kde no.
Ebe ọ bụ na amalitere m na GNU / Linux ahọrọla m Gnome-GnomeShell, ejiri m Fedora 17 na KDE maka ọnwa ole na ole ma eziokwu ahụ masịrị m mana anọghị m na desktọọpụ ahụ amaghị m ihe kpatara ya. Tupu ịbụ novice (m ka bụ mana na-erughị nke mbụ) Enwere m mmasị na GnomeShell mana ọ na-efu ihe na ihe bụ ọdụ ụgbọ mmiri mana ebe ọ bụ na anaghịzi m eme atụmatụ iji ụgbọ mmiri ahụ, anaghịzi m ahụ ya dị mkpa.
Ndewo maka edemede gị!
Echere m na ọ bụ otu n'ime echiche ole na ole na-enweghị oke ịnụ ọkụ n'obi.
n'aka nke ọzọ gnome na shei ya na-amasị m mgbe niile!
ịhazi onwe ya siri ike mana ọ ga-ekwe omume, naanị ị ga-amata obere css na ihe ndị ọzọ.
Naanị ihe na-adịghị m mma banyere shea gnome bụ mgbe ịdọrọ faịlụ site nautilus na windo, mana ọ nweghị ihe sitere na Open… enweghị ike idozi.
ma ọ bụghị na m hụrụ gnome shell ma m na-emegharị ya nke ọma
Echere m na ọ bụ ezigbo nhọrọ ma na-atụ aro ya nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-agwụla gị oge ochie nke kpochapụwo DE.
Zaghachi ka dartre
Anọ m na Gnome mgbe niile ma echere m na mgbanwe ahụ agafeela na nsogbu ya kachasị njọ. Ezubere ya ka ọ bụrụ ntakịrị na maka iji ndọtị (ya na mmadụ ole na ole ị nwere ike ghara ime mkpesa ọzọ maka ịghara ịmị mkpụrụ, nke dịka ọmụmaatụ na Unity enweghị m ike) Ruo ọtụtụ afọ, anyị ejirila ihe ndị dị ka compiz na-atụgharị uche na ha. Mana enwere m mmetụta mgbe niile na ihe ndị a nyere Linux ọrụ ọhụụ ma ọ bụ dị egwu. Niile ga-ekwe omume nhazi, ma ị hụrụ na ihuenyo nke ndị mmadụ ks. na e nwere ụfọdụ njakịrị. Nke a bụ nnwere onwe nke Linux, mana ọ bịakwara na ọnụahịa. Ejiri m ihe ahụ niile (eji m ụfọdụ n'ime nseta ihuenyo ahụ jọgburu onwe ya nke Gnome 2 na Compiz ma ọ bụ nkuzi banyere otu esi eme ka ọ rụọ ọrụ), mana rue taa, ọ bụrụ na Gnome na-agbaso ụzọ ahụ akara, enweghị m ebumnuche ịnabata onwe m na desktọọpụ ọzọ, ma ọ dịkarịa ala na kọmputa m. Karịa mgbanwe niile na ọkwa mmemme (GTK3 na ndị ọzọ) M ga-egosipụtakwa mbọ na-emekọ ihe nke nta nke nta na-enye Gnome akụkụ dị mma na nke ọkachamara. Ana m ekwu maka ngwa nke aka gị nke ji nwayọ nwayọ pụta na oge ga - azọpụta gị ịnwụnye ndị ọzọ ị na - eji: Egwu, Foto, Kalịnda, Elekere, wdg. Obi dị m ụtọ na nhazi oge m ga - abụ: miniPC na XFCE, maka nbudata na TV, laptọọpụ m dị ka kọmpụta isi na Gnome 3 Shell na Smartphone / Tablet na Android / iOS ma ọ bụ ihe ọ bụla na - abịa… maka ụlọ.
Gnome 3 ọ bụghị nke ọjọọ? Ugh… just tufufughi onye na-agụ ya obere.
Ọ bụrụ na site na-ekwu ihe m chere, m ga-atụfu ndị na-agụ, welcome bụ na ọnwụ 🙂
Otu na-erughị ahụ ..
Zaghachi na andresito
Ka ike nọnyere gị.
Anọ m na shea gnome ọnwa ole na ole na ubuntu mana m laghachiri n'otu, enwere m mmasị na ya nke ukwuu mana enwere m ịdị n'otu n'anya
M na-eji ya ma ọ masịrị m nke ukwuu, ọ na-atọ ụtọ
oru ngo a na-aga n’ihu: D.
M na-eji Uuntu-Gnome, mana onyonyo a dị ka ọ na eme na Sabayon.
Ihe ọzọ maka ndị nchịkwa, onyonyo ndị dị na mbadamba nkume gbasasịrị.
You tinye gnome, na onye ọrụ gị?
M emetụbeghị ndị Chrome ma ọ bụ Chromium ma ọ bụ Safari ọrụ gị n'ụlọnga. Agbanweela m ya n’oge ndị ọzọ, maka ihe ndị ọzọ. Chrome na-enye gị ohere ịme ya n’enweghị ntinye ọ bụla ... Mana amaghị m ihe ị ga - agbakwunye iji mee ka akara ngosi Gnome pụta.
Site na iPad ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Site na Chromium ọ bụ mgbe niile. Site na Chrome ọ naghị apụta ma ọ bụ na m na-eji Ubuntu:
-iPad: safari + mbadamba
-Chromium: chromium + ubuntu + ihe oyiyi na-enweghị atụ
Na chrome, ị ga-eji onye na - elekọta ọrụ switcher ndọtị ma chọọ post ebe a, nke na - ekwu maka otu ị ga - esi gbanwee ya.
Hụ otu m nwere ya ma mee mgbanwe kwesịrị ekwesị.
ị nwere ike inye m plss>.
Ka anyị lee, lee:
I bu chi m !!! Uche Ogbuagu Arụsị ndị Japan ọ bụ ị-15? arụsị mara oke mma
nke a bụ xddd dị afọ iri na asatọ, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ obere, google minisuka xD, ma ọ bụ jappydolls wdg xdddd, ihe niile dị mma> //
ezi> ma obu
Ejiri m ya, aga m enye ya ohere ohuru na 3.8.
Amaghị m na anaghị m ahụ ya ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe ọjọọ, echere m na ọ bụ ihe mmadụ chọrọ ma nwee ike iji ya, ọ ga-amasị m mana mgbe ị na-emepe ihe na ngwanrọ dị arọ gnome-shep na-erepịa akụ ndị m na-agaghị efu na m họọrọ xfce, ma gnome shei dị mma, ọ bụ ezie na m na-ahọrọ ịdị n'otu xD, ahụrụ m ụzọ mkpirisi ndị a rụzigharịrị anya ma na kde enwere m mmasị na mmetụ nke ịdị mma na ọrụ ya mana n'onwe ya interface nke kachasị amasị m bụ ịdị n'otu, n'agbanyeghị na m ga-achọ nwee 4 pc nke ọ bụla nwere xfce, kde, shei gnome na ịdị n'otu
4 ZhaGratH dijo
onye ma ka esi etinye nwunye gnome nke oma 3.8
Zaghachi na 4ZhaGratH
Na Ubuntu GNOME 13.04, Gnome 3.8 arụnyere na-agbakwunye PPA dị ka akọwara ebe a https://launchpad.net/~gnome3-team/+archive/gnome3
Ekpebiri m ịwụnye ya iji hụ ihe dị ọhụrụ (ha ga-apụta nke nta nke nta) yana n'ihi na 3.6 nke na-eso Ubuntu 13.04 arụghị ọrụ nke ọma maka m…. Gnome Shell na-aga nwayọ nwayọ. Ugbu a ihe niile na-agba ọsọ nke ọma ma na a di na nwunye nke extensions juru n'ọnụ ndị Gnome otu (ukara)…. desktọọpụ m.
Ọfọn, ọ bụrụ na akwara Gnome adịghị njọ, ọ bụ naanị ntakịrị nhazi, ọ masịrị m nke ukwuu lot
Ntinye SAMBA na nhazi na Ubuntu 12.04
Mfe njikọ WiFi na Arch linux